बिहान खाली पेटमा लगातार एक हप्ता किसमिसको पानी पिउनुहोस् र हेर्नुहाेस् यस्ताे चमत्कार !
बिहान खाली पेटमा लगातार एक हप्ता किसमिसको पानी पिउनुहोस् र हेर्नुहाेस् यस्ताे चमत्कार ! अंगुरलाई सुकाएर किसमिस बनाइन्छ जसमा आइरन, पोटाशियम, क्याल्सियम, म्याग्नेसियम र फाइबरको पार्याप्त मात्रा हुने गर्दछ ।
आइतवार, कार्तिक २१, २०७८ १०:४५
नेपाल अनलाइन पत्रिका – काठमाडौं। बिहान खाली पेटमा लगातार एक हप्ता किसमिसको पानी पिउनुहोस् र हेर्नुहाेस् यस्ताे चमत्कार ! अंगुरलाई सुकाएर किसमिस बनाइन्छ जसमा आइरन, पोटाशियम, क्याल्सियम, म्याग्नेसियम र फाइबरको पार्याप्त मात्रा हुने गर्दछ ।***यो समाचारको भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नु ***
यस कारण यसलाई स्वास्थ्यका लागि निकै फाइदाजनक मानिन्छ तर आयुर्वेद अनुसार दैनिक किसमिसको साटो यसको पानी पिउँदा धेरै फाइदाजनक हुन्छ । भारतका आयुर्बेद एक्सपर्ट अबरार मल्तानीका अनुसार किसमिसमा गुलियो मात्रा बढि हुने भएकाले रातभरी यसलाई भिजाएर राख्दा यसको गुलियो पन कम हुने र पौष्टिक तत्वमा वृद्धि हुन्छ ।
कसरी बनाउने किसमिसको पानी एक कप पानी उमालेर त्यसमा एक मुठ्ठी धोएको किसमिस हाल्नुहोस् र रातभरी छोडिदिनुहोस् । बिहान हल्का तातो बनाएर खाली पेटमा यसलाई खानुहोस् र किसमिसलाई मज्जाले चपाएर खानुहोस् । यस्ता छन् किसमिसको पानी पिउनुका फाइदाहरु:-
१) यसमा आइरनको मात्रा पनि प्रचुर हुन्छ । त्यसकारण किसमिस र यसको पानी खाँदा शरिरमा रगतको मात्रा बढ्छ जसले रक्तअल्पत्ता हुनबाट जोगाउँछ ।
२) किसमिस एक उत्कृष्ट डिटक्स गर्ने ड्राइफ्रुट हो । यसको पानीले शरिरको सबै टक्सिन बाहिर निकाल्ने गर्दछ ।
३) किसमिसमा फाइबर र अन्य पोषक तत्व प्रचुर मात्रामा पाइन्छ जसले कोलेस्ट्रोलको स्तरलाई नियन्त्रित गरेर मुटु रोगबाट पनि जोगाउँछ ।
४) किसमिसमा प्रचुर मात्रामा फाइबर पाइन्छ जसले पाचन क्रियामा सहयोग पुर्याउँछ । यसको पानी पिउँदा पाच क्रिया सही हुन्छ।
५) किसमिसमा एन्टिब्याक्टेरियल गुण हुन्छ। जसका कारण मुखको दुर्गन्धलाई टाढा राखेर घाँटीको संक्रमणबाट जोगाउँछ ।
६) किसमिसमा क्याल्सियम र माइक्रो न्यूट्रियन्ट पाइन्छ । यसले हड्डी र जोर्नी बलियो राख्न सहयोग गर्दछ ।
प्रतिरक्षा प्रणालीले कसरी काम गर्छ? कसरी बडाउने?
सविना गौतम - शनिबार, मंसिर १८, २०७८ ४:४२
प्रतिरक्षा प्रणाली बिना, हाम्रो शरीर ब्याक्टेरिया, भाइरस, परजीवी र अधिकबाट आक्रमण गर्न खुला हुनेछ।
७ मस्तिष्क व्यायाम जसले तपाईको दिमागलाई बलियो बनाउँदछ
सविना गौतम - शनिबार, मंसिर १८, २०७८ ४:२४
मस्तिष्क प्रशिक्षण आजका दिनहरूमा बलियो इच्छाहरू मध्ये एक हो, र मानिसहरूले प्रायः आफ्नो दिमागलाई तिखार्न र बौद्धिकता बढाउने तरिकाहरू खोज्छन्।
टेकु अस्पतालमा मंसिर २९ देखि टेकु अस्पतालमा इमरजेन्सी सेवामा निशुल्क उपचार
सविना गौतम - शुक्रबार, मंसिर १७, २०७८ ३:१६
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री विरोध खतिवडाको विशेष निर्देशन पछि शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकुको इमरजेन्सी सेवा निःशुल्क हुने भएको छ ।